ओस्कार–२०२१ मा नोमिनेट हुदैछिन् त प्रियंका चोपडा ? AahaKhabar
एजेन्सी, ५ असोज । बलिउड एवं हलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा ‘ओस्कार २०२१’मा छनौट हुदैछिन् ? भन्ने प्रश्न सबैको मनमा उठिरहेको छ । अभिनेत्री प्रियंकाको मेट्रिक्स, द ह्वाइट टाइगर, सिटाडेललगायत फिल्महरु ब्याक टु ब्याक आउने तयारीमा छन् ।
त्यसोत, उनको आगामी नेटफ्लिक्स फिल्म द ह्वाइट टाइगरबाट प्रियंकालाई बेस्ट सपोर्टिङ रोल एक्ट्रेसको रुपमा ओस्कार नोमिनेशन मिल्ने आशा गरिएको छ ।
वैराइटीले भर्खरै मात्र एकेडमीलाई लिएर आफ्नो पूर्वानुमान सार्वजनिक गरेको छ, जहाँ प्रियंका चोपडालाई बेस्ट सपोर्टिङ रोलको लागि सूचीमा राखिएको छ । यस लिस्टमा प्रियंकाको नाम मेरिल स्ट्रिप (द प्रोम), हान येन–री (मीनारी), नताशा लियोन (द युनाइटेड स्टेट्स् भर्सेस बिली होलिडे), र मरे विन्निंघम (न्यूज अफ द वल्र्ड)लगायतका अन्य हलिउड स्टार्सको साथमा राखिएको छ ।
प्रियंका चोपडाको उक्त नेटफ्लिक्स ड्रामा रामिन बहरानीद्वारा निर्देशित हो । यस फिल्म अरविंन्द अडिगाको यसै नामबाट आएको उपन्यासमा बनेको हो । यसमा एक गरीब भारतीय ड्राइभरको यात्रालाई प्रस्तुत गरिएको छ । तर, हालसम्म यस फिल्मको रिलिज डेट सार्वजनिक भएको छैन ।